Tolotra sidina mankany Venice amin'ny vidiny 60 fotsiny - Aza avela handositra izany! | Vaovao momba ny dia
Iray amin'ireo tolotra hafa izay tsy azontsika eritreretina be loatra izany. Satria ny fotoana toa izao dia tsy mitranga matetika. Miatrika a manolotra ny dia ho any Venise. Iray amin'ireo toerana tantaram-pitiavana sy mahagaga indrindra ananantsika. Noho izany, ho tonga lafatra ho an'izay fialamboly izay hameno ny baterinao.
Roa andro ihany, fa hanararaotra azy ireo koa isika. Noho izany dia nisafidy toerana sahaza sy hipetrahanay ihany koa izahay mankafy ny toerana tsara indrindra omen'ny Venice. Tsy mila mieritreritra momba ny famandrihana fotsiny sy amin'ny fanararaotana tsara ny dianao ianao.
1 Tolotra sidina mankany Venise
2 Hotely misy teti-bola any Venise
3 Inona no ho hita any Venise, ao anatin'ny roa andro
3.1 Kianjan'i St. Marka
3.2 Tetezana Rialto
3.5 Mitaingina Gondola
Tolotra sidina mankany Venise
Manomboka amin'ny iray amin'ireo ampahany manan-danja indrindra amin'ny dia izahay. ny boky ny tapakilan'ny fiaramanidina Fanalahidy io mba hahafahantsika miala sasatra rehefa mandamina foto-kevitra hafa. Noho izany, manolotra hevitra lavorary ho anao izahay. Ny momba ny fandaniana roa andro hankafizana ny tanànan'i Venise. Tanàna iray izay hita any amin'ny nosikely iray ary manana nosy 118 eo ho eo izay mifamatotra amin'ny tetezana isan-karazany. Efa afaka mahazo ny hevitry ny hatsarany isika!
Noho izany, tsy azontsika hadino izany. Ka eto ny sidina ho anao. Momba ny fialana amin'ny Alarobia 3 Oktobra ary miverina amin'ny Zoma 5 Oktobra. Sidina mivantana izany ary hiara-dia amin'ny sidina Iberia ianao. Satria andro vitsivitsy monja no hiresahantsika dia tsy nieritreritra ny hijery intsony izahay fa ny hitondra valizy. Izany rehetra izany, ho an'ny tapakila izay latsaky ny 60 euro fotsiny. Manana izany ianao amin'ny Mazava ho azy fa.
Hotely misy teti-bola any Venise
Ny tena marina dia satria mora dia mora eto amin'ity toerana ity dia tsy hita matetika izy io. Saingy mandritra ny roa alina dia tsy ho sarotra koa izahay. Izany no antony nifidiananay ny hotely 'La Pérgola di Venezia'. ny trano fandraisam-bahiny tsotra miaraka amin'ny terraces, parking, kianja filalaovana ary koa zaridaina. Lavorary miaraka amin'ny fianakaviana. Na dia nahazo efitrano ho an'ny euro 92 aza izahay nandritra ny roa alina. Sahabo ho telo kilometatra miala ny afovoan-tanàna izy io ary dimy avy eo amin'ny gara gara Santa Lucia. Ataovy ao amin'ny Hotels.com!
Inona no ho hita any Venise, ao anatin'ny roa andro
Azo lazaina fa manana fotoana ampy fotsiny isika, nefa tsy isalasalana fa hamela antsika hankafy toerana toa izao. Ny zavatra tsara indrindra raha vao tonga dia mifidy ny 'vaporetto'. Misaotra azy hanao fitsidihana ny Grand Canal ianao. Ho an'ireo izay tsy mahalala, ilay antsoina hoe 'vaporetto' dia karazana bisy fa karazan-drano.
Kianjan'i St. Marka
Aorian'ny dia an-drano dia ho tonga amin'ny Kianjan'i St. Marka. Iray amin'ireo teboka tena ilaina amin'ny diantsika. Izy io dia iray amin'ireo malaza indrindra ary hita eo afovoan'i Venise. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ny fananganana azy ary io no iray amin'ireo tsara indrindra. Ao anatin'izany dia hahita teboka hafa ianao handinihana toy ny: Basilika St Mark, izay iray amin'ireo tempoly ara-pivavahana manan-danja indrindra.
El Lapan'i Ducal io koa dia amin'izao fotoana izao. Trano mimanda aloha io mandra-pahatongany lasa trano mimanda na fonja. Azonao atao ny mitsidika azy mandoa 20 euro. Tsy azontsika adino ny Tranombakoka Correr, izay manan-danja indrindra ao Venise, na ilay trano avo indrindra antsoina hoe 'Campanile de San Marcos'. Izany rehetra izany dia amin'ny toerana iray, mba ahitanao azy tsy misy olana, manararaotra ny andro nahatongavanao.
Raha vantany vao nahita ny Plaza de San Marcos isika dia handeha mandra-pahatongantsika any amin'ny Tetezana Rialto. Io no tranainy indrindra ary noho izany no malaza indrindra any Venise. Izy io dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-9 ary ny fotoana rehetra dia tonga lafatra mba hahafahana mankafy azy, na mamelombelona azy amin'ny endrika sary. Raha miampita azy ianao dia hahita ilay antsoina hoe 'Rialto Market'. Tsena misokatra manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny XNUMX maraina.
Ity dia iray amin'ireo toerana hodinihina. Angamba tsy dia mankafy ilay tsangambato toy ilay teo aloha. Saingy amin'ity tranga ity dia hanana atmosfera betsaka izy hatramin'ny toerana fisakafoanana. Any no hankafizanao ny lovia mahazatra amin'ny vidiny tena mahavariana.
Samy ny basilika sy ny dome no be mpahalala indrindra, satria iray amin'ireo antsipiriany hita ao amin'ny karatra paositra rehetra. Nanomboka tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo izy io ary naharitra 50 taona vao vita. Miaraka amin'ny volafotsy octagonal sy trano fiangonana kely dia handravaka toerana manokana sy hikajiana izy ireo.
Tena ilaina izany rehefa any Venise isika. Ka mila manome azy ny fotoana sahaza azy isika. Noho izany, mila mandamina tsara ny tenanao ianao. Fa a mitaingina góngola Zavatra tsy manam-paharoa izy io, na dia eo aza ny vidiny. Angamba amin'ny fifandanjana, saika lafo kokoa noho ny tapakilan'ny fiaramanidina. Satria ny tahan'ny izay zahana dia 80 euro mandritra ny 30 minitra fotsiny. Raha te hanana mozika na fihirana koa ianao dia mila mandoa vola kely kokoa. Na izany aza, hoy isika, dia mendrika ny hiainana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » tolotra » Tolotra sidina mankany Venice amin'ny vidiny 60 euro fotsiny